Atreho ny hafa mahandro amin'ny mahandro be loatra ho an'ny Android | Androidsis
Over Cooks dia lalao fandrahoan-tsakafo vaovao amin'izany dia mila manomana lovia isan-karazany ianao mba hahasambatra ny mpanjifanao. Amin'ny karazana fifaninanana mifanohitra amin'ny fotoana dia tsy maintsy entinao any amin'ny tabilao na any amin'ny vilany izany.
Ny hevitra dia ianao afaka manomana lovia maro amin'ny fotoana fohy indrindra ary amin'izany mandroso ho lasa chef tena izy. Lalao mahafinaritra momba ny fitsaboana ara-pahitàna ary ahitantsika ny tenantsika manoloana ireo akora sy lovia maro mahandro. Ataovy.
1 Ilay chef be fihetsika amin'ny paikady
2 Ny mekanika mailaky ny Cooks Be loatra sy ny Internet
3 Lalao mampiankin-doha
Ilay chef be fihetsika amin'ny paikady
Lalao Cooks Many Many loatra izay tsy maintsy anindrianao amin'ny faritra samihafa ao an-dakozinao mba hahafahanao mifamadika amin'ireo akora ilainao na tarihinao mankany anaty afo na amin'ny takelaka fanapahana hanodinana azy ireo.
Ny fiankinan-doha dia satria tsy maintsy hanao ilay ianao lovia maro kokoa amin'ny fotoana fohy indrindra. Izany hoe, fametahana lakilasy iray na roa hanodinana ireo akora azo alaina ary avy eo dia tsindrio matetika ny takelaka fanapahana hanodinana ilay singa, na saona na voatabia hotapahana.
Toy izany koa no mitranga amin'ny vilany, na dia eto aza no miova ny mekanika. fotsiny tsy maintsy entinao ao anaty vilany ny holatra na voatabia ny manindry azy dia manomboka mangotraka. Tokony ho mailo ianao, satria misy fetr'andro handrahoana ny sakafo. Raha tsy maharaka an'io ianao dia mety ho very ilay fangaro ary mila manipy azy.
Ny mekanika mailaky ny Cooks Be loatra sy ny Internet
Cooks be loatra no nampiakatra ireo mekanika ireo, fa handeha ianao mitadiava hafa rehefa manana burger ianao ary lovia maro hafa mahandro hafa. Izy io dia iray amin'ireo kalitao tsara indrindra ary mamela antsika hisafidy fomba isan-karazany amin'ny fikarakarana ireo sakafo ireo.
Izy io koa dia misy amin'ny Internet hiatrika mpilalao hafa ianao hahita hoe iza no mahay kokoa amin'ny rantsan-tànany ary afaka manamboatra lovia maro ao anatin'ny fotoana fohy. Izy io aza dia manana safidy hilalao miaraka amin'ireo namana akaiky antsika, ka azo ampiana ity lisitry ny lalao multiplayer marobe ity hilalao azy ireo amin'ny maha-fianakaviana azy (indrindra amin'izao vanim-potoana quarantine noho ny coronavirus).
Zanaka lalao an-tserasera eo anelanelan'ny mpilalao 6 ka ny pique dia avo indrindra ary azonao tsara ny batterie rehefa mahandro lovia toy ny sushi, pizza, hamburger, lasopy, alika mafana ary maro hafa. Amin'ny maha lalao freemium azy io dia manana ireto safidy ireto ihany koa izy ireo hanamboarana ny avatar antsika ka hahazo valisoa izay mandrisika ny fandrosoana bebe kokoa.
Ka isika sisa no a lalao hampihetsi-po ny saina ary ny an'ny rantsan-tanantsika. Izy io dia manana bibikely na hafa, toy ilay iray izay azonao atao ny manomboka manadio lovia alohan'ny hanombohany azy, fa amin'ny ankapobeny dia mandeha tsara izy io. Eny, manome tsiny azy isika noho ny tsy nanoratany ny fomba tokony handrosoantsika, na dia mety ho mazava aza raha mampiasa kely ny lohanay isika.
Manintona tokoa ny fahitana azy ary tavela amin'ny maha-izy azy ny endriny hita maso. Tsy hoe vaovao izy io, fa tena mifanaraka amin'ny lalao mihitsy. Indraindray tsy ny tsara indrindra ny fampisehoana, satria asehony fa tsy milamina araka ny itiavantsika azy, fa mahafeno ny ambaratonga rehetra izany mba hiteraka traikefa tsara amin'ny lalao.
Cooks Be loatra dia azo alaina maimaimpoana amin'ny Play Store ary io dia iray amin'ireo lalao afaka mandany fotoana haingana avy amin'ny findainao. Raha efa tafiditra ao anaty drafitra pique ianao mba hampisehoana amin'ny hafa fa haingana dia haingana amin'ny rantsan-tànanao ianao dia hanana fotoana mahafinaritra, satria misy fotoana izay saika hiasa buffet misy olona 600 ary isaky ny segondra dia hararaotina.
Ankafizo ny lalao fahefany mifanohitra amin'ny mpilalao hafa ary raha miaraka amin'ny orinasa tsaratsara kokoa.
Mekanika samihafa rehefa mahandro
Mahafinaritra ny fahitana
Cooks be loatra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Midira amin'ny orinasa amin'ny lalao fandrahoan-tsakafo Cooks Be loatra
Ny fampiroboroboana maimaim-poana ny sehatra streaming